प्रविधीको युगमा बीमा चेतनाको लागि घरदैलोमा नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन : संचित बज्रचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
प्रविधीको युगमा बीमा चेतनाको लागि घरदैलोमा नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन : संचित बज्रचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०७५, सोमबार १७:०९
१७ बर्षको उमेरमा नै थापाथली प्रस्तुती गृहबाट एकाउन्टेनको पेशाबाट जागिरे जिवन सुरु गरेका संचित बज्रचार्य हाल प्रभु इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुकै कान्छो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बज्रचार्य रहेका छन् । १५ बर्षमै एसएलसी सके पश्चात् १७ बर्षदेखि जागिर सुरु गरेका बज्रचार्य सँग थुपै क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवहरु रहेका छन् । उनले अस्थायी रुपमा थापाथलीमा ८ बर्ष गरेका थिए । एसएलसी पछी इन्जिनियर र पाईलट बन्छु भनेर सपना देखेका बज्रचार्यले साथीहरुको लहलहैमा लागेर म्यानेजमेन्ट तिर आफनो शैक्षिक गन्तव्य लगेका थिए ।
सरकारी, गैरसरकारी संस्था, विजनेस हाउस र व्यपारिक क्षेत्रमा आवद्ध रहेर थुपै क्षेत्रको अनुभव बटुलेका छन् । विभिन्न क्षेत्रको कार्यभार समालेका बज्रचार्य बीमा बजारमा प्रवेश गरेको पनि १० बर्ष भईसकेको छ । बज्रचार्य प्रभु इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त हुदाँ ३५ बर्षका थिए । बज्रचार्यले आगामी दिनहरुमा पनि बीमा क्षेत्रमा आफनो कार्य निरन्तर अघि बढाउन लक्ष्य लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा कम्पनीको आगामी योजना र यसकोे गतिविधीमा आधारीत रहेर प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रचार्य सँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार:
बीमाको सम्रग बजारलाई कुन रुपमा हेर्नु भएको छ र निर्जिवन बीमाको बजार कस्तो छ ?
बीमाको बजार सरसर्ती हेर्दा बढेपनि जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो त्यो रुपमा बढ्न सकेको छैन । हालको तथ्याङक अनुसार १२ प्रतिशत बीमाको बजार बढेपनि ८८ प्रतिशत खालि नै रहेको छ । ८८ प्रतिशतको बजारको क्षेत्रमा अझै पनि विस्तार गर्न बाटोहरु रहेको छ । हामीले त्यसलाई पनि विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । निर्जिवन बीमाको क्षेत्रमा पनि यही नै लागु हुन्छ । बीमालाई त्यत्ति महत्व दिएको पाईदैन । यो अपरीहार्य हो । बीमा हामीलाई निकै जरुरी रहेको छ, जसले आर्थिक वृद्धि देखि लिएर सम्रग राष्ट्रलाई नै हित गर्छ । यस्तो चिजलाई नै मानिसहरुले बुझन सकिरहेको छैन । यो दुःखको कुरा हो । निर्जिवन बीमा भनेको दायित्व वहन गरिदिने संस्था हो । घर किन्दा ऋण लागेको छ भने बीमा गर्ने र मोटरमा बीमा अनिवार्य गरेको भएर बीमा गर्न परिपाटी हालको दिनमा भईरहेको छ । बीमा जबरजस्ती हैन । यो बुझेर गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
नेपालमा पहिले नै १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यसै बिच सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले बजारमा आफुलाई स्थापित गराउँन कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
बीमा कम्पनी बढेसगै बीमाको बजार पनि बढीरहेको छ । हिजोका दिनमा बीमाको बजार सानो रहेको थियो । आज कम्पनीको विस्तार सगै यसको चेतना पनि बढ्दै गईरहेको छ । हाम्रो रणनिती स्पष्ट रहेको छ । हामीले पहिले कुरा प्रविधीलाई जोड दिईरहेका छौ । हामीले मोबाईल एप ल्याएका छौ । मोबाईल एप मार्फत नै बीमा गर्न सक्ने सुविधा ल्याईसकेका छौ । जनतालाई कसरी छिटो र छरीतो सुविधा दिन सकिन्छ । बीमीललाई कसरी सन्तुष्ट दिन सकिन्छ र प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गरिसकेपछी बीमीतले सहज रुपमा सुविधा पाओस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
यो कुरामा मानिसहरुको गलत धारणा पनि रहेको छ । बीमा भनेको अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले गर्ने हो । शाखामा नै आएर मानिसहरुले बीमा गराउने कुरा पनि हैन । बीमा त अर्भिकता र सर्भेयर मार्फत रहेको हुन्छ । हाम्रो शाखाहरु देशको विभिन्न ४६ वटा ठाउँहरुमा रहेको छ । यसका साथै हामीले मुस्ताङमा पनि शाखा खोलिसकेका छौ । यसको साथै हामीले शाखाहरु खोलेपनि सबै ठाँउमा सेवा प्रदान गर्ने हेतुले हामीले घरदैलो सेवा पनि दिईरहेका छौ । कम्पनी जहाँँ भएपनि हाम्रो अभिकर्ता र सर्भेयरहरु प्रत्येक व्यक्तिको घरदैलौमा नै पुगीरहेको छ ।
अन्य कम्पनीहरुमा भन्दा तपाईको कम्पनीले के फरक सेवा सुविधा दिईरहेको छ त सेवाग्राहीहरुलाई ?
हामीले ग्राहकहरुको सुविधाको लागि सरल र सहज रुपमा सुविधा दिने र प्रविधीको समयमा भएको कुरालाई पनि उपभोग गरि सेवा प्रदान गरीरहेका छौ । हाम्रो मोबाईल एप रहेको छ, जसमा आफूलाई चाहिने सेवा सुविधा छनौट गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ । यसको साथै हामीले मुस्ताङमा पनि शाखा खेलेका छौ । यसका साथै मोटर बीमा गर्न ग्राहकहरुको सेवाको लागि हामीले सबै क्षेत्रको ग्यारेजहरुमा सम्झौता पनि गरिसकेका छौ ।
मुस्ताङको शाखामा बिशेष गरि कस्तो खालको बीमा बढी भएको पाउनुभयो ?
हरेक ठाँउका कुना काप्चा सम्म पुग्ने हाम्रो अभियान रहेको छ । यही आधारमा हामीले मुस्ताङमा पनि शाखा खोल्यौ । मुस्ताङको शाखाबाट बीमाको काम ठिकै भईरहेको छ । तर हामीले जुन रुपमा सोचेको त्यहाँ बीमा हुन्छ भनेर सोचेका थियौ, त्यो अनुसार चाँहि भएन । बिशेष गरि त्यहाँ कृषि बीमा, मोटर र केही घरहरुको पनि बीमा भएको छ । कृषिमा बिशेष गरि स्याउ खेतीको बीमा भईरहेको छ । त्यहाँको कृषकहरु बीमा प्रतीको धारणा राम्रौ पाएका छौ । केही मोटरहरुको बीमा पनि भएको छ र घरको बीमा कम नै छ भन्दा पनि हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि समयमा दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तथ्याकले पनि त्यहि देखाउँछ ? यसको कारण के होला ?
यो समस्या पुरानै हो । यदि बीमीतले दाबीको समयमा आवश्यक कागजात पेश गरेमा हामीलाई भुक्तानी गर्नुमा कुनै आपत्ती रहेको हुदैन । बीमा कम्पनीहरुको पनि आफनै छुटै किसिमको नियम रहेको हुन्छ । उक्त नियम भित्र रहेर नै बीमीतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रहेको हुन्छ ।
आधा भन्दा बढी जनसङख्या कृषिमा आधारीत रहेको छ ? यसमा सबैलाई समेटिन नसक्नुको कारण के होला ?
सरकारले कृषि बीमाको लागि ७५ प्रतिशत अनुदान पनि गरेको छ । उहाँहरुलाई फाईदाको कुरा नै रहेको छ । बीमाको बारेमा नबुझेर नै यसमा समस्या भएको हो । यदि कृषकहरुले पनि बीमा बुझ्ने हो भने पक्कै पनि गर्दछ ।
हालै बीमा समितीले तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्च्युरी साईन्सको पनि अध्यापन सुरु भएको छ । के यसले नेपाली बीमा कम्पनीमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्ला त ?
बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको छ । बीमा समितीबाट खडा भएको तालिम केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविधालयबाट मान्यता प्राप्त एक्च्युरी साईन्सले भावी दिनमा यसको परीपूती गर्न सहज गर्दछ ।
तपाईको बिचार अब आउँने बीमा विद्येयक कस्तो हुनुपर्छ ?
बीमा विद्येयकमा नै छलफल भईरहेको छ । छलफल पछि आएको निचोडले पक्कै पनि राम्रो नै हुन्छ होला । मुख्य कुरा चाँहि बीमा गर्नेहरुको लागि सहज किसिमको वातावरण तय गरिदिनु पर्यो ।
हरेक क्षेत्रमा बीमाको जागरण फैलाउनु पर्यो । यसका साथै जनचेतना फैलाउनु पर्यो , बीमा शिक्षामा मात्र जोड दिनुपर्छ । यसमा संचार माध्यमको पनि ठूलो हात रहेको हुन्छ । एउटा सानो कार्यक्रम, गोष्ठी आयोजना गर्दा केही मानिसमा मात्र जानकारी रहन जान्छ भने संचार माध्यमले सबै क्षेत्रमा यसलाई पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।
कम्पनीको तर्फ बाट बीमा चेतना बढाउँन तपाईहरुले के गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ?
हामीले विभिन्न ठाँउमा बीमा चेतना दिईरहेका छौ । बीमा गर्दा हुने फाईदाको बारेमा हामीले जानकारी दिईरहेका हुन्छौ । प्रविधिले फड्को मारीसकेको छ । यस्तो समयमा बीमा चेतनाको लागि हामी घरदैलोमा नै पुग्नु पर्छ भन्ने छैन । प्रविधीको प्रयोग गरेर हामीले चेतना प्रदान गर्न सकिन्छ । जस्तै ः हामीले ग्राहकको सेवा सुविधाको लागि छिटो छरीतो सेवा प्रदान गर्न , मोबाईल मार्फत नै बीमा योजना खरीद गरेर छनोट गर्न सक्ने जस्तो व्यवस्था लयाएका छौ । यसका साथै मोटर बीमाको लागि हामीले सबै जिल्लाहरुको ग्यारेजमा सम्झौता पनि गरेका छौ ।
हाम्रो कम्पनीको आगामी योजनामा बिशेष त हामी प्रविधीमा नै जाने रहेको छ । यसका साथै ग्राहकहरुलाई कसरी छिटो र छरीतो सुविधा प्रदान गर्न र सन्तुष्ट दिने भन्ने रहेको छ ।
सानिमा लाइफको आइपिओ एक घण्टामै सबै बिक्यो
एनएलजी इन्स्योरेन्सको साधारणसभा भोलि हु्ँदै, के-के छन् एजेण्डा ?
रिलायबलले बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्दै, जगेडा कोषमा ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ जम्मा हुने
एक बीमा कम्पनी सहित तीन कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा दिए निवेदन